archana: Save Tiger
Posted by archana at 3/17/2007
कस्तो खुलस्थ वाभुकता सारै रमाईलो लागो पढ्न त कुरै कुरामा सार मिलायो नभन्नु होल कुकुरको महत्व र कुरलाई हेर्ने दृष्टिकोण आ-आफ्नै ठाँउमा सबैको होला तर म भने कुकुरलाई एउटा सामान्य जनावर र मलाई मन नपर्ने या सत्रुको रुपमानै लिने मानिस हो अर्को एउटाकुराको याद पनि आयो मैले बच्पनमा आफ्नो घरको कुकुरलाई अति सम्म गर्थै। है एक दिन त सलाई पारेर लगाई दिएको थिँए कुकुर को पुछर बलेर कुँइ कुँइ गर्दै कुदो बुबाले मलाई पनि कुँई कुँईपार्न बाँकि राख्नु भएन
यो ब्लगलेख्ता त म पागल जस्तै एक्लै हाँसेर बबाल भै रहेको छु ।
तर आजमेरो लेख्ने सोच भनेको अर्कै थियो जुन तल हेर्दै जानुहुन्छ कि?
छाप्न बिर्सेको समाचार
हिजोबाट यलमाया केन्द्रको हलमा बिना कुनै तडक भडकतासाथ निकै रोचक र जति रोचक तेतिनै भाबुकपनि एउटा सत्रसुरु भएको छ त्यसमा मज्जाले तिन्टा फुस्ताको घम्सा घम्सी पनि देखिन्छ सत्रको सुरुवात पहिलो पुस्ताका कमलमणी दिक्षित ज्यूबाट भयो भने दोस्रो पुस्ताबाट त्यसैलाई नियाल्दै थिए प्रमुख अतिथि सुवर्ण शाक्यले तेतिकैमा अहिलेको जल्दो बल्दो युवा पुस्ता यो हिसावले तेस्रो र्याङ्कमा परे पनि के कम र निकै फुर्तिकासाथ सत्रको सञ्चालन आँफै हर्ताकर्ता र आफ्नै मार्गचित्रमा चल्नसक्ने यो पुस्ताको चलाख्याईले गरेको छ।
सत्रमा भौतिक तडक भडकता देखिदैन तर गाम्भिर्याता र दुरदृष्टिता भने आकलन गरेको भन्दा निकै । यसबाट नेपालको युवा पुस्ताले यो क्षेत्रमा गरेको प्रगती र देखाएको उत्सुक्ता निकै मनन्योग्य पनि छ भन्न कुनै अतिसयोक्ति नहोला।
सफ्वेर सोतन्त्रताको कुरा हो मैले गर्न खोजेको । सुचना प्रबिधिमा भएको द्रुतगतिको विकासले गर्दा यसमा चुस्तताको प्रभाव पनि निकै पर्ने गरेको म पाउछु त्यो भएर होला मैले भुमिका बाध्न पनि तेति पारा नल्याएको । सूचना प्रबिधिको कुरा नेपालमा निकै पहिला चर्चाको बिषय बनेको मैले सुनेको हो । तर यसको समुचित बिकास र यसक्षेत्रलाई सुँहाउदो जनसक्ति जब नेपालमा क्षेत्रगत कलेजहरुको बिकास भयो तब मात्र केहि फड्को मारेको छ भन्नु पर्छ। आंसिकरुपमै भए पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लाईदिए पछि निकै नि सलबलाउन पुगेको छ यो क्षेत्र नेपालमा ।
सुचना प्रबिधिमा ४ बर्षको अध्ययन गरेपछि देशी कलेजहरुमा उच्चशिक्षाको अध्यनार्थ बाटो सुनिस्चित प्राय हुनेर नेपालमै पनि निकै सुकिलो मुकिलो भएर जिवन धान्न पाउने नै यसको ताज मान्नु पर्ला। जे जसरि भए पनि नेपालका यो क्षेत्रमा लागेको युवा पुस्ता बिभिन्न बाबजुतका साथ पनि देशिया प्रबिधिसँग प्रतिस्पर्दा गर्न र नयाँ कुरालाई आत्मसाथ गर्न निकैनि सक्षम छ। एतिकैमा नेपालको सरकारले पनि सुचना प्रबिधिलाई बिकासर बिस्तार गर्नमा युवापुस्ताको चासोलाई आत्मसाथ गर्न तायार भएको छ। जसको फलस्वरुप निजिक्षेत्रको लागि खुलाबजार खुला प्रतिस्प्रदा नयाँ कलेजहरुको सम्बन्धनमा देखाएको उदारताले नै आज युवा पुस्ताले यो फड्कोमारेको हो।
सफ्टवेरको कुराको चुरोत मलाई तेसि सारो थाहा भएन तर यो अर्को कुरा छनि सूचना प्रविधि यस्को बारेमा त मपनि पछि छैन है गाँठे। किन भने च्याट, नेट, ल्बग त मेरो दिनाचार्या नि बनेको र घरासी शमाचारमा पनि निकै गम्भिरताका साथ सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेको छु। यो त भयो मेरो कुरा तर कुरा दुइदिने सत्रकै रोचक होला।
हिजो बाट सुरुभएको सत्र आज सकिँदैछ । सत्रमा बिदेशि दोस्रो पुस्ता र स्वदेशी तेस्रो पुस्ता बिचको अन्तर सम्बन्ध प्रष्ट देख्छिन्छ। प्रछिधिमा भएको विकास नयाँ पुस्तामा जानकारीगराउन निकै उत्साहित देखिन्छ त्यो पुस्ता र बिकास र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न निकै लालायित भएर लागेको छ तेस्रो पुस्ता पनि।
यसरी हेर्दा नेपालमा समग्र रुपमा खुला र स्वतन्त्र सफ्टवेरको माग आगामी दिनहरुमा निकै बड्ने देखि्छ यसको सुरु भने भै सकेको छ।
यसको लागि सरकार र युवापुस्ताको सहकार्यको पनि खाँचो छ जस्तो मलाई लाग्छ।
हेरम आगामीदिनहरु उदयिमान दिनहरुजस्तै रहुन नेपाली युवापुस्तालाई खुला र स्वतन्त्र सफ्टवेरकोलागि।
Thank you so much Pratik for your detail information about EVENT.
u did really good job about telling story of picture else ppl thing sth eles.. coz what ppl see thinks like that so have to tell...